मध्यपूर्वमा आईएलओ प्ररकणः श्रमिक माथि अपमान – News Portal of Global Nepali
मध्यपूर्वमा आईएलओ प्ररकणः श्रमिक माथि अपमान
लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले यूएईबाट श्रमिक उद्धार गर्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी केही ब्यक्तिले आफूमाथि अनियमितता गरेको आरोप लगाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कोइरालाले श्रमिक उद्धारको लागि भएको सम्पूर्ण खर्च विवरण पारदर्शि रहेको दावी गरेका छन्।
‘सामाजिक सेवामा लागेको मान्छे हुँ । मैले इमान्दारीका साथ काम गरेको छु, त्यसैले मलाई कुनै डर छैन,’ उनले शनिवार भने,‘म व्यक्तिगत फाइदाका लागि एनआरएनए अभियानमा लागेको होइन । यहाँ राम्रो पदमा जागिर गर्छु, कमाइ राम्रै छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी छ । आफ्नै व्यवसाय पनि छ ।’
‘अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न पठाइएको पैसामा आँखा लगाउनु पर्ने मेरो अवस्था हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ रु’ कोइरालाको प्रश्न थियो । एनआरएनए यूएईको अध्यक्ष भइसकेपछि संस्थागत सुधार तथा सामाजिक सेवामा कोइराला र उनको टिमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि हुदै आएको हो । तर, अकस्मात उनीमाथि अनियमितताको आरोप लागेको छ । किन यसो भयो ? जवाफमा कोइरालाले भने,‘राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई हिलो छ्याप्नै पर्छ भन्ने नेपाली मानसिकताको उदाहरण हो यो,राम्रो काम गर्नेलाई विभिन्न बाहनामा दुःख दिने गरेको सुनिन्थ्यो,अहिले मेरो हकमा पनि भएको यही हो ।’ कोइरालाको प्रश्न थियो,‘खाएको विष पो लाग्छ । नखाएको विष लाग्छ र ?
अहिलेसम्म आफूले कमाएको सामाजिक प्रतिष्ठा र आफ्नो करियर नै खत्तम पार्न केही समूहले चलखेल गरिरहेको कोइरालाको ठम्याइ छ । भन्छन्,‘ ममाथि आरोप लगाएर केही तत्वहरु आइसीसीको अधिवेशन नजिकिदै गर्दा यसैलाई मुद्दा बनाउने षड्यन्त्रमा सहभागी भएको मैले बुझेको छु।’
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघ युएइका उपाध्यक्ष पासांग शेर्पाले मिडियामा आए जस्तो आफुहरुले कुनै आर्थिक अपचलन नगरेको बताएका छन् ।
शेर्पाले कार्यसमितिले आफुहरुलाई निलम्बित गरेको नभै आफुहरु निष्क्रिय मात्र बसेको जनाए।
‘आइएलओको सहयोगमा संचालित कार्यक्रम युएइमा खुल्लारुपमा संचालन गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले आइसीसीको निर्देशन अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ युएइका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले काठमाडौँमा ब्यांक खाता खोल्नु भएको हो। अध्यक्षलाई सघाउने उपाध्यक्षको कर्तव्य हो। त्यसैले उहांकै अनुरोधमा म खाता संचालकको रुपमा बसेको हुं। यो कुरा अध्यक्षले पनि पटक, पटक बताई सक्नु भएको छ’ उनले भने।
एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले अनिमियतता भएको भन्ने आरोप बाहिर आएपछि छानविन समिति गठन गरिएको बताए । ‘
आर्थिक अनियमितता भयो भन्ने कुराहरु आएपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसैले छानविन समिति गठन गरेका छौँ,’ पन्तले भने, ‘यसबारेमा अहिले नै केही भन्न मिल्दैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका कुरामा भर पर्ने कुरा पनि भएन । यथार्थ फरक पनि हुनसक्छ । यदि कोही कसैबाट गल्ती भएको रहेछ भने हामी कारवाही गछौँ ।’